Football Khabar » कसले जित्ला कोपा अमेरिका ? यसो भन्छ सर्वेक्षण
कसले जित्ला कोपा अमेरिका ? यसो भन्छ सर्वेक्षण
दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका जुन १४ बाट हुँदैछ । ब्राजिलमा हुने यस संस्करणको प्रतियोगितमा दुई आगन्तुक टिमसहित कूल १२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
प्रतियोगिता सुरु हुन दुई साता बाँकी छँदा उपाधि दाबेदार टिमहरूको बारेमा भविष्यवाणी सुरु भएको छ । यसपटक आयोजक ब्राजिल, साबिक उपविजेता अर्जेन्टिना, साबिक विजेता चिली, उरुग्वेलगायत टिमलाई प्रमुख दाबेदार टिम मानिएको छ ।
स्पेनिस बार्सिलोनाबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका लिओनल मेस्सी यसपटक सबैभन्दा बढी चर्चा र केन्द्रमा हुनेछन् । सम्भवतः करिअरको अन्तिम ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागिरेहका ३१ वर्षीय मेस्सीका लागि देशका लागि ठूलो उपाधि जित्ने यो अन्तिम मौका हुनसक्छ ।
तसर्थ पनि यसपटक अर्जेन्टिना र मेस्सीलाई यस प्रतियोगितामा विशेष रूपमा हेरिएको छ । मेस्सी जसरी पनि यसपटक देशलाई करिअरको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जिताउन चाहन्छन् ।
तर, एक सर्वेक्षणले भने अर्जेन्टिनालाई दोस्रो उपाधि दाबेदार टिम मात्रै मानेको छ । ‘ओड्स’ले गरेको एक अनलाइन सर्वेक्षणअनुसार यसपटक कोपाको बलियो दाबेदार टिम ब्राजिल हो ।
फुटबल समर्थकहरूलाई सहभागी गराएर गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणबाट धेरैले कोपाको उपाधि दाबेदार टिम ब्राजिललाई मानेका छन् । त्यसपछि मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनालाई दोस्रो उपाधि दाबेदार टिम मानिएको छ ।
कोपा खेल्ने देशहरूको अन्तिम टिम, खेलाडी र विगतको समेत नतिजालाई ध्यानमा राखेर गरिएको सर्वेक्षणमा अर्जेन्टिनालाई ब्राजिलभन्दा कमजोर मानिएको छ ।
त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा उरुग्वेलाई उपाधि दाबेदार मानिएको छ भने चौथोमा कोलम्बिया छ । पाँचौं नम्बरमा पछिल्ला दुई सिजनको लगातार च्याम्पियन टोली चिली रहेको छ ।
केही समर्थकले भने जापानलाई पनि उपाधि दाबेदार टिम मानेका छन् । जापान र कतार यसपटक कोपामा आगन्तुक टिममा रूपमा सहभागी हुँदैछन् ।
प्रकाशित मिति १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १०:१७